Ajụjụ - Jinyun ọla Co., Ltd.
Igwe anaghị agba nchara Anklets
ígwè waya bangles
Igwe anaghị agba nchara ọla aka
Chain njikọ ọla
Man ọla aka
Watch Band ọla aka
Igwe anaghị agba nchara Ọla ntị
Steel agba tent
Igwe anaghị agba nchara ọla È
Ọkara dị oké ọnụ ahịa nkume ọla È
Igwe anaghị agba nchara necklaces
Nile anākwuba na nti na Chains
Igwe anaghị agba nchara nile anākwuba na nti
mgbatị nile anākwuba na nti
n'anya nile anākwuba na nti
ochie plated nile anākwuba na nti
Ọkara dị oké ọnụ ahịa nkume nile anākwuba na nti
Igwe anaghị agba nchara Mgbaaka
Ọlaedo yiri mgbaaka
ntupu yiri mgbaaka
ígwè agba yiri mgbaaka
Daalụ maka ase.
Anyị bụ ndị anaghị agba nchara ọla emeputa na wholesaler, otú anyị moq bụ USD 300, 3 PC kwa imewe kwa size.
Ma ọ bụrụ na gị mkpa n'ezie sample nwalee, ị nwere ike ịtụ USD 100 dịkarịa ala, na mbupu na-eri bụ banyere USD 30 n'ihi na 1 n'arọ.
Ya bụrụ na anyị nwere ike iru mma azụmahịa na enyi.
Anyị niile nwere onye na aka ịza ajụjụ gị. Anyị kweere na ka ọbịbịa nke ndị ahịa ọrụ, na ga-eme ihe niile kwere omume ka afọ ju anyị ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, na-ekwu, ma ọ bụ aro, biko kpọtụrụ anyị.
Otu Ọkwa: (accoring gị iji ego, ị ga-enwe dị iche iche ozo disccount)
Ma anyị natara ihe na ọzọ iwu ụbọchị ọ bụla, anyị na-agbazi anyị na-arụ ọrụ usoro iji nye a mma ọrụ n'ihi na ndị ahịa anyị na-eme ka n'aka ndị ahịa anyị nwere ike na-enweta iwu na oge.
Esonụ bụ ọhụrụ anyị na-arụ ọrụ nzọụkwụ:
(Dị ka Bejing Time)
1. Kwa ụtụtụ, n'ihi na niile ọhụrụ iwu nke na-akwụ ụgwọ na-ama n'ihu 12:00 ehihie, anyị ga-eme ndokwa ka ọ na-elele na ngwaahịa na otu ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na-eme na ugwo mgbe 12:00 ehihie, anyị ga-eme ndokwa ka ọ na-elele na ngwaahịa na-esote ụbọchị.
2. Mgbe ị natara mbukota ndepụta, ma ọ bụrụ na ị pụrụ ime ka ndị ikpeazụ ugwo tupu 6:00 pm, anyị nwere ike ụgbọ mmiri si na iji n'otu mgbede.
Ọ bụrụ na ị na-eme na ugwo mgbe 6:00 pm, anyị ga-ụgbọ mmiri na-iji na-esote ụbọchị.
3.For iwu nke na-akwụ ụgwọ na-ama, ma ọ bụrụ na i mere na-agbakwunye ka emecha itule tupu 12:00 ehihie, anyị ga-ezitere gị ndị ikpeazụ mbukota ndepụta n'otu mgbede na ụgbọ mmiri na-iji na-esote ụbọchị.
Ọ bụrụ na i mere ihe na-agbakwunye ka emecha itule mgbe 12:00 ehihie, anyị ga-ndokwa na-agbakwunye iji na-ezite ikpeazụ mbukota ndepụta na echi ka ị na iji ga-ụgbọ mmiri mgbe echi.
Tupu ị na-eme iji, biko obiọma ndokwa oge dị ka gị onwe gị na ọnọdụ.
Ndo maka ihe ọ bụla mma na mere ka ị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko na-eche free ịkpọtụrụ anyị.
Paypal akaụntụ: julong@julongsteeljewelry.com
Biko kpọtụrụ na anyị tupu ị na-eme na ugwo site n'ebe ọdịda anyanwụ n'otu, na-elele erite aha.
Bank Nyefee Ozi
Company na akaụntụ
Erite uru Bank aha: HSBC
Bank Usoro: 004
ụlọ ọrụ aha: Jinyun Trade Limited
Bank Account dịghị. : 801406885838
erite uru Bank: 1 Queen si Road Central, Hong Kong
Swift Usoro: HSBCHKHHHKH
Anyị ụgbọ mmiri ọ bụla na adreesị na ụwa.
Ihe nyere iwu site n'ọnụ anyị na-Ẹnam ekese site EMS ma ọ bụ TNT ma ọ bụ DHL ma ọ bụ FedEx ma ọ bụ gbasie.
Anyị ga-agwa gị na nsuso Ee site e-mail ka anya dị ka gị iji na-Ẹnam ekese mgbe anyị na-enweta ya na awara awara ụlọ ọrụ.
A n'okporo ámá adreesị a chọrọ maka nnyefe.
Ngwá ahịa ga-anapụta ọkọlọtọ Air-awara awara n'ụlọ n'ụlọ, nke na-ewe ihe dị ka 3-5-arụ ọrụ ụbọchị.
Oge nzipu anaghị agụnye nhazi oge.
Anyị na ngwaahịa na-Ẹnam ekese si kwa ụbọchị, site na Monday na Saturday, ma e wezụga ememe. Ọtụtụ iwu enịm na weekdays ga-Ẹnam ekese ke 2 ma ọ bụ 3 ụbọchị, mgbe iwu enịm ná ngwụsị izu ga-Ẹnam ekese ndị na-esonụ Monday. Ị ga-enweta ihe e-mail nkwenye na gị nsuso nọmba. Iri-na-anọ awa mgbe ị na-enweta gị nsuso nọmba, ị ga-enwe ike soro gị iji online na
Oge nzipu iche dabere na mba nke na-aga.
jinyun ọla emeworo siri ike mmekorita ya na niile nnukwu anọ mbupu ụlọ ọrụ: DHL, gbasie, FedEx na TNT inye ọkachamara n'ụwa nile ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ nnyefe.
Ihe ga-Ẹnam ekese si na-esonụ ahịa ụbọchị mgbe unu enyocha. Ke ofụri ofụri, ọ pụrụ iri banyere 3-5 ahịa ụbọchị n'ihi na nnyefe, dabere dị iche iche nnyefe pụtara na ị họrọ. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka na-ezighị ezi ma ọ bụ undeliverable address. Biko eme ka n'aka gị mbupu adreesị bụ eziokwu na nke na deliverable.
Anyị na-ekwe gị soro gị iji na click nke a òké. Mgbe gị Mbupu na-egosi, ị ga-enweta a nsuso nọmba gị nkwenye e-mail.
Ole ọ ga-ewe m ihe iru m?
Biko mara na azụmahịa ụbọchị, ewepu Saturday, Sunday na Public Ememe, na-gbakọọ na okwu nke nnyefe oge. Ke ofụri ofụri, ọ na-ewe banyere 3-5 ahịa ụbọchị n'ihi na nnyefe.
Olee otú m pụrụ soro m Mbupu?
Anyị ụgbọ mmiri gị zụọ tupu ọgwụgwụ nke na-esote ụbọchị azụmahịa mgbe unu enyocha-esi. Anyị ga-eziga otu e-mail na nsuso nọmba otú ị nwere ike ịlele ọganihu gị nnyefe na ụgbọelu 'website.
Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na m Mbupu mgbe abịarute?
Biko ekwe ruo 10 ahịa ụbọchị n'ihi na gị ihe ga-anapụta. Ọ bụrụ na ọ ka na-na-abata, biko iru anyị site na ịpị "Kpọtụrụ Anyị" button na website. Anyị ga-azụ gị ngwa ngwa.